Nagu saabsan - Zhejiang AHEM Qaybo otomaatig ah Co., Ltd.
Qaybaha dayactirka ee Mercedes-Benz
Qaybo ka mid ah dayactirka Scania
Qaybaha dayactirka ee Volvo
Qaybaha u dayaca DAF
Qaybaha dayactirka loogu talagalay IVECO
Qaybo ka tagey MAN
Qaybaha dayactirka ee RENAUL
Kusoo dhawow AHEM
Zhejiang AHEM Auto Parts Co., Ltd. oo la aasaasay 1993, waa soo saare xirfadle ah oo ka kooban walxaha bareega otomaatiga. Waxay ku taal Fengqiao Town Industrial Park, Zhuji, Zhejiang. Shirkaddu waxay ka kooban tahay aag 13,000m² ah, waxay leedahay in ka badan 50 shaqaale ah waxayna ku faantaa habka wax soo saarka horumarsan iyo qalabka baaritaanka oo dhameystiran sida shubka dhinta, shaabadda, qalabka mashiinka CNC, daaweynta dusha sare ee badeecada iyo khadka isku imaatinka.
In ka badan 20 sano oo khibrad wax soo saar ah iyo hagaajinta qalabka baaritaanka habka wax soo saarka iyo nidaamka maareynta tayada ayaa xaqiijinaya isku halaynta iyo adkeysiga cunsuriyada. Wax soo saarka horseedka ah waxaa loo adeegsaday dhir badan oo matoorro waaweyn ah oo ku yaal Shiinaha, badeecadahana waxaa loo dhoofiyaa Koonfur-bari Aasiya, Ameerika Bariga Dhexe, Afrika, iwm.
Abuuritaanka tayo aad u fiican waa siyaasadeena tayada iyo fikradda ganacsiga.Inagoo wajahaya caqabadaha iyo fursadaha warshadaha gawaarida, waxaan diyaar u nahay inaan la shaqeyno ganacsatada gudaha iyo kuwa ajaanibta ah si loo gaaro faa'iidooyin wadajir ah iyo xaaladaha guuleysiga.
Workshop Casting dhinta Automatic
93 Tianyang Road, magaalada Fengqiao, Magaalada Zhuji, Gobolka Zhejiang